မြင်တတ်ကြပါစေ Seeing | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မြင်တတ်ကြပါစေ Seeing
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 21, 2010 in Critic, Cultures, Myanma News, Opinions & Discussion | 13 comments
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ မြန်မာသံဝန်ထမ်းများ ဦးသိန်းစိန်ကို တွေ့ဆုံပှုံဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီဘလော့
ကျနော်တို့မြန်မာတွေဟာ သတ္တိရှိတယ် ခေါင်းမာတယ်လို့ သတင်းမွှေးပါတယ်၊ ကြည့်ပါလား လူမျိုးအမည်ကိုက မြန်လည်းမြန် မာလည်းမာတဲ့ မြန်မာတဲ့၊ လက်ရုံးရည် ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို လွန်စွာ အားကိုးခဲ့ပုံရပါတယ်။ ရေမြေတောတောင် သဘာဝခြင်းလည်း နီးစပ်၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားခြင်း လည်းတူတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေလို မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်ရန်သူက ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ချတာ သမိုင်းမှာ အထင်အရှားပါ။ ရလဒ်အနေနဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ခံရတာတော့ တပိုင်းပေါ့လေ။ ပြောချင်တာက မဟုတ်မခံ ငါသာမှန်၏ဆိုတဲ့ ဖိုက်တာမိုက်တီးများပါ။ နေမဝင်အင်ပါယာသခင် ဗြိတိသျှတွေကိုလည်း အညံ့မခံတွန်းလှန်၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြန်တော့လည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေလို ဓနသဟာယအဖွဲ့ ထဲမှာတောင် မဝင်ခဲ့ဘဲ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းဘဝကို တည်ထောင်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီနေ့ဧရာဝတီဘလော့ စာမျက်နှာမှာ ကြက်ဖွတ်ခေါင်းဆောင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဆိုသူ ဗိုလ်သန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားကို သွားလည်တော့ မြန်မာသံရုံး အမှုထမ်းတွေရဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ညီညာဖျဖျ ထိုင်ပြီး ကျိုးနွံဝပ်တွား အရိုအသေပေးမှုကို ခံယူတဲ့ပုံကိုတွေ့မိပါတယ်။ သူတပါးကို ရဟန်းသံဃာ မဟုတ်ဘဲ၊ မိဘဘိုးဘွားမဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်အုပ်ချီတာ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ အလွန်ရှားပါတယ်။ ရှေးကတော့ မင်းညီမင်းသားတွေ၊ မှူးကြီးမတ်ရာတွေကို သာမန်ပြည်သူတွေက လက်အုပ်ချီ ဘုရားထူး ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်များမင်း အလှည့်ကျတော့လည်း ဘယ်နေမလဲ မြန်မာတွေကို အရင်ခေတ်ကလိုပဲ ဘုရားထူးခိုင်း၊ လက်အုပ်ချီခိုင်းတာပေါ့။
ဒီလို နိုင်ထက်စီးနင်း ပဒေသရာဇ်ခေတ် သက်ဦးဆံပိုင် အပြုအမူတွေ ပျောက်ကွယ်ခဲ့တာ သူ့ကျွန်ဘဝ လွန်မြောက်ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီခေတ် အပြီးကထဲဖြစ်ပြီး ပြန်ပေါ်လာတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ် မြန်မာတို့ စစ်ကျွန်ဘဝကို ထပ်မံကျရောက်စဉ်ကထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် မဆလ ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကလည်း ငှက္ကကြီးဆိုပြီး သူ့ရှေ့မှာ လက်အုပ်လေးတွေချီရတာ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ တွေ့ဖူးသလိုပါပဲ။ အလွန် ဆိုးဝါးလာတာကတော့ ၁၉၈၈ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါ။ အိုင်ဒီယာကတော့ တပ်ရှုပ်ကြီးဗိုလ်သန်းရွှေလက်ချက်လားမသိ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ပါရဂူလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ လူတွေစိတ်ကိုဘယ်ကစ ချိုးနှိမ်ရမလဲဆိုတာ သိထားလို့ပါ။ စတာတော့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်က စခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ တပ်ရှုပ်ကြီးက လူကြားထဲ သူ့မျက်ခွက်ကြီးကို မပြရဲလို့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ကို မြောက်ပေးပြီး နေ့တိုင်း လူကြားထဲမှာ ဂွေးတက်အောင် ကခိုင်းပါတယ်။ သူ့ကိုကြိုဆိုရသူများက လက်အုပ်လေးတွေချီပြီးစောင့်ရတာ စစ်အစိုးရခေတ် ဖက်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ တပ်ထဲမှာလည်း တပ်ရင်းမှူးကိုစလို့ ငယ်သားတွေက အဘလို့ နှုတ်ကျိုးနေအောင် ခေါ်ရတဲ့ ကာယကံရော ဝစီကံရော ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေအောင် ပုံစံရိုက်သွင်းတာပါ။
အိမ်နီးနားချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ တဦးနဲ့တဦး လက်အုပ်ချီပြီး ဆဝါဒီခပ်လို့ နှုတ်ဆက်တယ်၊ ဂျပန် ကိုရီးယားတွေလည်း တဦးနဲ့တဦးတွေ့ရင် ခါးလေးကိုင်းလို့ အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ အတုယူ လေးစားစရာပါ။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကြတော့ရော ဒီလိုအစဉ်အလာမျိုး ရှိခဲ့ပုံမရပါ။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီးမွန်း နာဂစ်ကိစ္စနဲ့ မြန်မာပြည်လာတော့ ဒုက္ခသည် စခန်းကို သွားလေ့လာစဉ် လက်အုပ်ချီ နှုတ်ဆက်တဲ့ ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည်လို့ လက်အုပ်ချီတာ တွေ့ရလို့ ကြည်နူးမိပါတယ်။ အပြန်အလှန် လေးစားခြင်း၊ တန်းတူရည်တူရှိခြင်း၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားခြင်းတို့ဆိုတာ လူမျိုးတိုးတက် ကြီးပွားဖို့လိုတဲ့ အခြေခံအချက်တွေပါ။ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုး ထားတတ်မှ သူတပါးကိုလည်း လေးစားရကောင်းမှန်း သိပါတယ်။ သူတပါးဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း လူ့သားတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အာဏာ၊ငွေကြေးနဲ့ မဖြတ်ဘဲ လူ့တန်ဖိုးကျင့်ဝတ်ကို စံပြုနိုင် ရပါမယ်။ ဟိုလူ့တမျိုး ဒီလူကျတော့တဖုံ၊ အပြင်ဘန်းက တမျိုး အတွင်းစိတ်က တဘာသာ မဖြစ်ရ၊ မဖြစ်အောင် စိတ်ဓာတ်ကို မွေးယူပေးရပါမယ်။ ဒါတွေမပြောဘဲနဲ့ အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေ သုညပါ။ ဘာတွေမှားနေသလဲ၊ ဘာတွေပြင်ဖို့လိုအပ်သလဲဆိုတာ မျက်မှန်စိမ်း မတပ်ဘဲ သိဖို့၊ ထောက်ပြဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင်တော့ သဲထဲရေသွန် ဆိုသလို ရေးတာပဲ လက်ညောင်း၊ ပြောတာပဲလေကုန်၊ ဖတ်သူပဲခေါင်းနှောက် မျက်စိမှုန်ရုံ ရှိပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
ယူအန် အတွင်းရေးမှူးချု့ပ် ဘန်ကီးမွန်း နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များကို တွေ့ဆုံစဉ်
**သဲထဲရေသွန် ဆိုသလို ရေးတာပဲ လက်ညောင်း၊ ပြောတာပဲလေကုန်၊ ဖတ်သူပဲခေါင်းနှောက် မျက်စိမှုန်ရုံ ရှိပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။**
တို့နိုင်ငံကဝန်ကြီးတွေအကြောင်းဆိုလို့သွားသတိရမိတယ် မဆလ လက်ထက်ကပေါ့ သူငယ်ချင်းကဆက်သွယ်ရေးရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ် တနေ့သူဆီအလယ်ရောက်တော့သူငယ်ချင်းအလုပ်မအားဖြစ်နေတယ် တဖက်ကပို့နေတဲ့ မက်စစ် ခေါ်မလါး တတီးတီးနဲ့လက်တဖက်ကလဲပြန်ပြန်နှိပ်သေးတယ် လက်တဖက်ကလိုက်ရေးနေတယ် ဒါနဲ့ကိုယ်လဲဖတ်ကြည့်မိတာပေါ့ ဟင်းအမည်တွေနည်းတာမဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ နောက်၃ရက်ကြာယင်တို့မြို.ကိုဝန်ကြီးလါမယ်လေတဲ့ သူတို့အဖွဲ့လါယင်စားဘို့မှာနေတာ တော်နေကြာဒီစာရင်းရုံးသွားပို့ပေးရမယ်တဲ့ ဒါကြောင့်လဲစကားအဖြစ်တောင်ကျန်ခဲ့သေးတယ် ဝန်ကြီးဘယ်သူကမှာစားသွားပါသည် တဲ့….
သူ ရာထူး အဆင့်တန်းရှိလို့ ၈ ခိုးခံတာ ခင်ဗျားကမကျေနပ်တော့
ခင်ဗျားအဖေကို ၈ ခိုးစေခြင်တာလား
ပြည်တွင်းမှာ သူခိုးဓားပြလုပ်ပီး နေလို့ မ၇
“တရားသဘော၊ ဘယ်လိုပြောလည်း၊ လိပ်ကြောကြောင်ကော်၊ ပြောင်ချော်ချော်သို့။”
တိုင်းပြည့်ကျေးဇူးရှင်အမောင်စစ်သည် —- ရေ
စစ်တပ်မရှိရင် မြန်မာပြည်မှာ လူဦးရေ သန်း ၅၀ လောက်ရှိတယ်
မင်းတို့ ထက် သာမယ် ဆိုတာတော့ ငါ သေသေချာချာ ပြောရဲတယ်
အိုဂုဏ်သိက္ခာကျင့်ဝတ် ၆၀ တို့ ဖြင့် မပြည့်ဝပါသော တိုင်းပြည့်ကျေးဇူးရှင်အမောင်စစ်သည်………
အမောင်၏ စာစကားတို့ သည် အလွန်အမင်းရိုင်းပြလေစွတကား… အမောင်၏ မိဘတို့ သည်မသွန်သင် မဆုံးမ ခဲ့လေသလား? အမောင်၏ နာမည်သည်လည်းအလွန်အမင်းမှားယွင်းနေလေပြီ.. တိုင်းပြည်၏အစစ်အမှန်ကျေးဇူးရှင်သည် တောင်သူလယ်သမားများသာ ဟု အမောင် မူလတန်းတုန်းက မသင်ခဲ့ရလေသလား? အမောင်၏စစ်တပ်သည် ကောင်းခြင်း နှင့် ဆိုးခြင်း အနက် ဆိုးခြင်းအဆုံးတိုင်ရောက်ရှိနေခြင်းကို မသိလေရော့သလား..သို့ တည်းမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေခြင်းလား.. သို့ တည်းမဟုတ် သိလျက်နဲ့ ဘဲ အထက်အာဏာကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်းကြောင့်လား.. အမှန်တကယ် အမောင်သည် စစ်တပ်ထဲမဝင်ခင်တုန်းက သာမာန်ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ.. အကယ်၍ အမောင်သည်တပ်ထဲ မရောက်ခဲ့သည်ရှိသော် ယနေ့ လက်ရှိ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးခံစားနေရတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သိရမှာပါ.. အမောင်တပ်ထဲဝင်ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါ.. တကယ် တိုင်းပြည်ကြီးကိုချစ်လို့အဖျက်အမှောင့် ရန်တွေကို ကာကွယ်ချင်လွန်းလို့ဆိုတာ ၁၀၀% အကျော် မဟုတ်ရပါဘူးလေ….. တကယ်တော့ ၁၀တန်းအောင်/ဘွဲ့ ရပြီးခါစ ရွေးစရာလမ်းမရှိလို့ ရွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံပါ.. အခုအထက်ကပို့ စ်မှာ တပ်က လူ အကြောင်းပါလာတော့(တကယ် စစ်တပ် မကောင်းမှန်း၊ အများပြည်သူ ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းပြောတာမှန်မှန်းသိပေမယ့်) ကိုယ့်တပ်ကို အထိမခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြောမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပါ ထည့်သွင်း ဝန်ခံစမ်းပါ အမောင်.. စစ်တပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးတည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်ရပါဘူးလေ.. အခြားအခြားသော ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ခြေ လက် ခေါင်းတွေပါဘဲ.. ဒီတွေကို လက်ခံနိုင်ပြီ ဆိုရင် အမောင်ဟာ လူပီသသွားပြီ…
အမောင်စစ်သည်။ ရိုင်းစိုင်းလှချဉ့်လား။မဟုတ်မှလွဲရော၊သင်သည်ဗိုလ်သန်းရွှေ သို့မဟုတ် သူ့အောက်ဆွဲဖြစ်ရမယ်။ ဒီလိုလူမျိုးများကသာဒါမျိုးရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောတတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်၊
ပြောနိုင်ရင်တော့ အမောင်စစ်သည်ဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့အောက်ဆွဲကြိမ်းသေပေါက်ဘဲ။
တမင်သက်သက် လိုက်ကလိနေတာတွေပါ သူ့ ခံယူချက်ဆိုတဲ့ ပုံစံနည်းနည်းမှမပါ ပါဘူး
သူ ဟာသ လုပ်နေလားမသိဘူး
ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ နာမည်ကို ကြည့်တာနဲ့ သိသာတယ်လေဗျာ
ပါသေးလား = မြို့ကလူကြီးမင်းများထံအစည်းအဝေး(သို့)ကိစ္စတခုခုနဲ့များေ၇ာက်၇င်..အဲ့ဒီလူကြီးမင်းများ ကမေးတဲ့မေးခွန်း။ သွားတော့လဲပူဇော်၇မြဲဒုက္ခ။
ကျန်သေးလား = မြို့ကလူကြီးမင်းများနယ်ကိုေ၇ာက်လာသောအခါမေးလေ့၇ှိသောမေးခွန်။ လာတော့လဲပူဇော်၇မြဲဒုက္ခ။
သတင်းတွေ ကြည့် မိရင် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတင်းကြီး အရှက်မရှိ နာမည်တပ်ထားတဲ့ ကောင်ကြီးတွေကို လက်အုပ်ချီ နှုတ်ဆက်နေကြတာတွေ တွေ့တိုင်းခါးသီးလိုက်ရတာ… လက်အုပ်ချီ ရလောက်အောင် သီလ မဖြူစင်တာ သိနေရက်နဲ့ အဲဒီကောင်ကြီးတွေ ကို လက်အုပ်ချီနေရတဲ့ လူတွေကို သနားမိတယ်..
“တိုင်းပြည့်ကျေးဇူးရှင်အမောင်စစ်သည်” တဲ့ အဲ့ဒီနာမည်မြင်လိုက်တာ ညစ်ညမ်းဟာသဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ